#farayarenews @journalist Beesha Habar Gidir oo Sheekh Xasan Daahir ka dhigeysa Hogaamiye Fiican oon dambi laheyn Dowladana codsi u dirtay Beesha uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir Aweys ee Habar Gidir ayaa hada ku hoolan bad baadinta Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo sidii looga dhiqi lahaa dambiyadii dagaal uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku waxyeeleeyay. Sheekh Xasan Daahir Aweus ayaa u muuqday intii uu Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab katirsanaa nin ka maarmay beeshiisa hasa ahaatee hada Marka uu xaalkiisa soo xumaaday kana soo baxsaday Al-Shabaab ayuu u qeylo dhaansaday Beeshiisa kana codsaday Bad baadintiisa. Odayaal iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Habar Gidir uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir ayaa u ololeenaya in Sheekha ay Dowlada Soomaaliya iska cafiso kana codsaday Dowlada in Dalka Qadar loo dhoofiyo, waxa ayna Sheekh Xasan Daahir ku Tilmaameen Nin aan hubeesneen oo waayeel ah mudana in loo naxariisto. Afhayeenka odayaasha beelaha Hawiye nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa ku baaqay in si wanaagsan loola dhaqmo Shiikh Xasan Daahir Aweys oo hadda ku sugan degmada Cadaado ka dib markii uu ka soo baxsaday Xarakada Al- shabaab khilaaf soo kala dhex galay awgeed. Axmed Diiriye ayaa sheegay in inkastoo Xasan Daahir uu ka tirsanaa Al-shabaab, uu haddana yahay nin oday da’ ah loona baahan yahay in loo taliyo loolana dhaqmo si naxariis leh oo bani aadamnimo ay ku jirto. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hada kamid ahaa Hogaamiyaasha sare ee Kooxda Al- Shabaab horeyna u ahaa Hogaamiyihii Xisbul Islaam ayaa lagu tabayanaa dagaalo uu huriyay in ay ku dhinteen dad ka badan Boqolaal qof oo Soomaali ah halka kumanaan kuna ay ku barakaceen Colaada uu Sheekh Xasan Daahir Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka uu ka huriyay. Dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin go’aankeeda ku aadan sida ay ka yeeleyso Hogaamiyaha Baxsadka ah ee katirsanaa Al- Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la qorsheenayo in laga soo dajiyo Magaalada Muqdisho. | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders #farayarenews @journalist Beesha Habar Gidir oo Sheekh Xasan Daahir ka dhigeysa Hogaamiye Fiican oon dambi laheyn Dowladana codsi u dirtay Beesha uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir Aweys ee Habar Gidir ayaa hada ku hoolan bad baadinta Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo sidii looga dhiqi lahaa dambiyadii dagaal uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku waxyeeleeyay. Sheekh Xasan Daahir Aweus ayaa u muuqday intii uu Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab katirsanaa nin ka maarmay beeshiisa hasa ahaatee hada Marka uu xaalkiisa soo xumaaday kana soo baxsaday Al-Shabaab ayuu u qeylo dhaansaday Beeshiisa kana codsaday Bad baadintiisa. Odayaal iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Habar Gidir uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir ayaa u ololeenaya in Sheekha ay Dowlada Soomaaliya iska cafiso kana codsaday Dowlada in Dalka Qadar loo dhoofiyo, waxa ayna Sheekh Xasan Daahir ku Tilmaameen Nin aan hubeesneen oo waayeel ah mudana in loo naxariisto. Afhayeenka odayaasha beelaha Hawiye nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa ku baaqay in si wanaagsan loola dhaqmo Shiikh Xasan Daahir Aweys oo hadda ku sugan degmada Cadaado ka dib markii uu ka soo baxsaday Xarakada Al- shabaab khilaaf soo kala dhex galay awgeed. Axmed Diiriye ayaa sheegay in inkastoo Xasan Daahir uu ka tirsanaa Al-shabaab, uu haddana yahay nin oday da’ ah loona baahan yahay in loo taliyo loolana dhaqmo si naxariis leh oo bani aadamnimo ay ku jirto. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hada kamid ahaa Hogaamiyaasha sare ee Kooxda Al- Shabaab horeyna u ahaa Hogaamiyihii Xisbul Islaam ayaa lagu tabayanaa dagaalo uu huriyay in ay ku dhinteen dad ka badan Boqolaal qof oo Soomaali ah halka kumanaan kuna ay ku barakaceen Colaada uu Sheekh Xasan Daahir Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka uu ka huriyay. Dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin go’aankeeda ku aadan sida ay ka yeeleyso Hogaamiyaha Baxsadka ah ee katirsanaa Al- Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la qorsheenayo in laga soo dajiyo Magaalada Muqdisho. – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
#farayarenews @journalist Beesha Habar Gidir oo Sheekh Xasan Daahir ka dhigeysa Hogaamiye Fiican oon dambi laheyn Dowladana codsi u dirtay Beesha uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir Aweys ee Habar Gidir ayaa hada ku hoolan bad baadinta Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo sidii looga dhiqi lahaa dambiyadii dagaal uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku waxyeeleeyay. Sheekh Xasan Daahir Aweus ayaa u muuqday intii uu Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab katirsanaa nin ka maarmay beeshiisa hasa ahaatee hada Marka uu xaalkiisa soo xumaaday kana soo baxsaday Al-Shabaab ayuu u qeylo dhaansaday Beeshiisa kana codsaday Bad baadintiisa. Odayaal iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha Habar Gidir uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir ayaa u ololeenaya in Sheekha ay Dowlada Soomaaliya iska cafiso kana codsaday Dowlada in Dalka Qadar loo dhoofiyo, waxa ayna Sheekh Xasan Daahir ku Tilmaameen Nin aan hubeesneen oo waayeel ah mudana in loo naxariisto. Afhayeenka odayaasha beelaha Hawiye nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa ku baaqay in si wanaagsan loola dhaqmo Shiikh Xasan Daahir Aweys oo hadda ku sugan degmada Cadaado ka dib markii uu ka soo baxsaday Xarakada Al- shabaab khilaaf soo kala dhex galay awgeed. Axmed Diiriye ayaa sheegay in inkastoo Xasan Daahir uu ka tirsanaa Al-shabaab, uu haddana yahay nin oday da’ ah loona baahan yahay in loo taliyo loolana dhaqmo si naxariis leh oo bani aadamnimo ay ku jirto. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hada kamid ahaa Hogaamiyaasha sare ee Kooxda Al- Shabaab horeyna u ahaa Hogaamiyihii Xisbul Islaam ayaa lagu tabayanaa dagaalo uu huriyay in ay ku dhinteen dad ka badan Boqolaal qof oo Soomaali ah halka kumanaan kuna ay ku barakaceen Colaada uu Sheekh Xasan Daahir Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka uu ka huriyay. Dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin go’aankeeda ku aadan sida ay ka yeeleyso Hogaamiyaha Baxsadka ah ee katirsanaa Al- Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la qorsheenayo in laga soo dajiyo Magaalada Muqdisho.
June 27, 2013 BASHIR HASHI YUSSUF Leave a comment
Beesha Habar Gidir oo Sheekh Xasan
Daahir ka dhigeysa Hogaamiye Fiican oon
dambi laheyn Dowladana codsi u dirtay
Beesha uu kasoo jeedo Sheekh Xasan Daahir
Aweys ee Habar Gidir ayaa hada ku hoolan bad
baadinta Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo sidii
looga dhiqi lahaa dambiyadii dagaal uu dalka iyo
dadka Soomaaliyeed ku waxyeeleeyay.
Sheekh Xasan Daahir Aweus ayaa u muuqday
intii uu Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab katirsanaa
nin ka maarmay beeshiisa hasa ahaatee hada
Marka uu xaalkiisa soo xumaaday kana soo
baxsaday Al-Shabaab ayuu u qeylo dhaansaday
Beeshiisa kana codsaday Bad baadintiisa.
Odayaal iyo Siyaasiyiin kasoo jeeda Beesha
Habar Gidir uu kasoo jeedo Sheekh Xasan
Daahir ayaa u ololeenaya in Sheekha ay Dowlada
Soomaaliya iska cafiso kana codsaday Dowlada
in Dalka Qadar loo dhoofiyo, waxa ayna Sheekh
Xasan Daahir ku Tilmaameen Nin aan
hubeesneen oo waayeel ah mudana in loo
Afhayeenka odayaasha beelaha Hawiye
nabadoon Axmed Diiriye Cali ayaa ku baaqay in
si wanaagsan loola dhaqmo Shiikh Xasan Daahir
Aweys oo hadda ku sugan degmada Cadaado ka
dib markii uu ka soo baxsaday Xarakada Al-
shabaab khilaaf soo kala dhex galay awgeed.
Axmed Diiriye ayaa sheegay in inkastoo Xasan
Daahir uu ka tirsanaa Al-shabaab, uu haddana
yahay nin oday da’ ah loona baahan yahay in loo
taliyo loolana dhaqmo si naxariis leh oo bani
aadamnimo ay ku jirto.
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo hada kamid
ahaa Hogaamiyaasha sare ee Kooxda Al-
Shabaab horeyna u ahaa Hogaamiyihii Xisbul
Islaam ayaa lagu tabayanaa dagaalo uu huriyay in
ay ku dhinteen dad ka badan Boqolaal qof oo
Soomaali ah halka kumanaan kuna ay ku
barakaceen Colaada uu Sheekh Xasan Daahir
Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka uu
Dowlada Soomaaliya ayaan wali ka hadlin
go’aankeeda ku aadan sida ay ka yeeleyso
Hogaamiyaha Baxsadka ah ee katirsanaa Al-
Shabaab Sheekh Xasan Daahir Aweys oo la
qorsheenayo in laga soo dajiyo Magaalada
→ Sheekh Xasan Daahir “reer Cadaado waxaad tihiin Ansaarti oo kale,aan idiin duceeyo jihaadka ila wada”warki ugu dambeeyay caawa+Akhriso Jun 27, 2013 Sidaan horay idinkugu balan qaadnay waxaan si joogto idin kugu soo gudbin doonaa hadba wixii kasoo kordha xaaladda Sh. Xasan Daahir Aweys oo wali ku sugan Cadaado. Eragadii manta galinkii hore ka duushay Muqdisho ee gaaray Cadaado iyo odayaal ka kala yimid degmooyinka gobolka Galgaduud ayaa shir hordhac ah galay, waxayna isku qeybiyeen laba qeybood oo kala ah beelaha Saleebaan iyo Ceyr, waxaana lagu heshiiyay in marka hore ay beesha Saleebaan la kulmaan. 50 oday oo Saleebaan ah oo uu horkacayo Nabadoon Axmed Diiriye ayaa kulan dheer la yeeshay Xasan Daahir waxayna u sheegeen inay u wadaan nabad iyo badbaado, isla markaana ay banaanka ku sugayaan dhowr iyo labaatan oday oo beeshiisa Ceyr u dhashay. Waxayna kula taliyeen inuu aado Muqdisho oo damaanad nabad galyo lagu siin doono. Waxayna waydiiyeen halka uu jeclaan lahaa inuu uga sii gudbo degmada Cadaado. Sh. Xasan Daahir oo aan wax yar fakarin ayaa hadalkii qaatay wuxuuna yiri “Saleebaanow degaankiinu wuxu gaaray horumar weyn, Cadaadana waan arkay oo si fiican bay u dhismatay, waxaan idinka rabaa maanta inaad Ansaartii Nabi Maxamed (NNKH) oo kale aad noqotaan, oo aan idinkugu duceeyo sidii uu Nabi Maxamed ugu duceeyay Ansaar. Waxaan idiin wadaa Jihaad barakaysan, waxaanan rabaa inaan halkaan uga dhawaaqo ururkii Xisbul Islaam, halkaana ay noo noqoto xarun barakaysan oo laga sii wado Jihaadkii xaqaa ahaa… Amaanka aad Muqdisho ka sheegteen waxaa ka horeeyay damaanad iyo amaan ay ii balan qaadeen wadamada Qatar, Sucuudiga iyo Norway, dhamaantoodna waan ka diiday, dowlad Soomaaliyeed oo aanan aqoon saneyna kama yeelayo hada, ee Jihaadka ila qaata aan idiin duceeyee” Markii uu hadalka ka baxay Sh. Xasan ayaa waxa qaatay mid ka mid ah odayaashii Saleebaan wuxuuna yiri “Sh. Xasanow dhismaha iyo horumarka aad ku aragtay Cadaado waa mid ay keeneen dadkii kasoo qaxay Jihaadkaagii Xamar. Adigana waxa hada Cadaado kaaga daba keenay waa Jihaadkaagii Xamar. Reer Cadaadana diyaar uma aha qixitaan iyo dagaal kalee, tolkaaga banaanka taagan ayaan kuusoo galinaynaa ee la kulan, wixi aad isku waafaqdaana noosoo sheega. Waxaadna ogaataa inaadan Cadaado sii joogi doonin ee dooro meeshii aad uga gudbi laheyd bari subax oo Jimce ah” Halkaasna waxaa ku dhamaaday wajigii koowaad ee kulankii Saleebaan iyo Xasan Daahir. Kadibna waxa shir albaabadu u xiran yihiin wada galay Sh. Xasan iyo odayaasha tolkiisa, oo ay ka mid yihiin Ugaaska Ceyr, Janaral Indhacadde iyo Janaral Subxaany, kuwaasoo hada gabalku u dhacay, walina wax natiijo ay aysan kasoo bixin, waqtigaan aan qoraalka idiin soo gudbinayno oo ah Maqrin kadib xiliga geeska Afrika.
← War Deg Deg ah: Diyaaradii Qaadi laheyd Xasan Daahir oo ka dagatay Cadaado “Xagee loo wadaa” Published on June 27, 2013 Warar si deg deg ah saacado kahor inaga soo gaaray Magaalada Cadaado ee xarunta Ximan iyo Xeeb ayaa sheegaya in diyaarad gaar ah ay magaaladaas ka dagatay. Diyaaradaas gaarka ah ayaa qaadi doonta Hogaamiye Xasan Daahir Aweys oo isku soo dhiibay Maamulka Ximan iyo Xeeb ee bartamaha Soomaaliya ka dhisan. Saraakiil kusugan Magaalada ayaa sheegay in diyaaradan oo si gaar ah uu usoo kireeyay Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Xubno kale oo dowlada ah ay ka dagatay gudaha Cadaado. Waxaa diyaaradaan ay Xasan Daahir gayn doontaa Magaalada Muqdisho ee casimada dalka, waxaana wehlin doona xubno katirsan Xisbul Islaam oo horey magaalada ugu sugnaa iyo Saraakiil Shabaab ah oo isaga lasoo goosatay. “Diyaarada Xasan Daahir uqaadi laheed Muqdisho waxaa ay kusugan tahay Cadaado”ayuu sheegay Sargaal katirsan Maamulka Ximan iyo Xeeb. Afhayeenka Madaxtooyada ayaa sheegay in Xasan Daahir uu wadahadal la furayo dowlada Soomaaliya, ayna taas tahay mid aad loogu farxo. Shabaab wali kama aysan hadlin isa soo dhiibitaanka Xasan Daahir Aweys, hase ahaatee dhawaan ayay ku dagaalameen baraawe ciidamo taageersan Axmed Godane Hogaamiyaha Shabaab iyo ciidamo ay hogaaminayaan xubno Shabaab ah oo ay kamid yihiin Xasan Daahir, Sh Roobow Abuu Mansuur iyo Ibrahim Afghan.